Yibani noMthandazo kaMariya Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
La Dumisa uMariya umthandazo Ngomnye wemithandazo yokuqala esiyifundayo kwaye ngumbuliso kwiNtombikazi kaMariya. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngalo mthandazo unamandla, uze endaweni elungileyo, apha siza kuchaza ukubaluleka kwalo mthandazo kunye nentsingiselo yawo.
Umthandazo kwiNtombi Enyulu kaMariya
1 Thandaza uMariya Umthandazo ekufuneka uyenze ngemihla yakho
2 Iziseko zebhayibhile zomthandazo we-Maria
3 Ndifanele nditsho nini ukuthi Mvumeleni uMariya?
I-OIsabelo sika-Ave Maria kufuneka uphumeze ntoni ngeentsuku zakho
Isichotho uMariya ngumthandazo onikezelwe kwiNtombikazi enguMariya. Ngokwesiqhelo yenye yemithandazo yokuqala esiyifundayo njengabantwana kwaye isebenza njengombuliso onothando kumama kaYesu. Sonke sifuna kwaye kufuneka sisondele kuye, sive ukuba uyasikhusela kwaye uhamba nathi, yiyo loo nto sithandaza lomthandazo kwaye yenye yezinto zokuqala esizifundayo, ukusondela kumama kaThixo nomama wethu .
Lo mthandazo usetelwe kumculo kule minyaka ingapheliyo, ngabaqambi abahlukeneyo abanjengoCharles Gounod, uAnton Bruckner noGiuseppe Verdi, bezisa amandla kubantu, bevumela abantu abazimase, ngengoma yendumiso, ukuba bavakalise iimvakalelo zakhe. yovuyo, iintlungu, ukubongoza, phakathi kwabanye abaninzi.
Kubalulekile ukuba sazi ukubaluleka okukhulu kwegama le- Dumisa uMariya umthandazo, esekwe kukuphindaphindwa kwamagama nakwisibhengezo sefomula. AmaKatolika amaninzi awuthandaza lo mthandazo engaqondi ukuba athetha ntoni, engabuhoyi ubunzulu besivakalisi ngasinye. Kungenxa yoko le nto siza kuthetha ngokunzulu ngakumbi malunga nokwakhiwa kwesi sivakalisi singezantsi:
'' UThixo akusindise uMariya, uzele lubabalo, iNkosi inawe '' Ekuqaleni, kuboniswa umbuliso wesithunywa esithunyelwe nguThixo, apho kuthiwa uMariya uzele lubabalo kuba iNkosi uSomandla naye kwaye iya kumkhusela.
"Usikelelwe wena phakathi kwabo bonke abafazi kwaye sinentsikelelo nesiqhamo sesizalo sakho, Yesu" Ukwamkelwa kuka-Saint Elizabeth kuyongezwa (cf. uLuka 1, 41) ukuzaliswa nguMoya oyiNgcwele. Ungomnye wabantu bokuqala ukumisela iNtombikazi enguMariya njengeNtsikelelo, oku kubulela ekuzinikeleni kwakhe eNkosini kwaye eligcinile ilizwi lakhe.
"UMariya oyiNgcwele, Mama kaThixo, sithandazele" Kwesi sicelo, uPopu John Paul II ubonakalisa ukuba umalunga nombuliso ka-Saint Elizabeth kwi # 12 efumaneka kwi-Encyclical Redemptoris Mater. Intombikazi enguMariya usinika unyana wakhe, owasifelayo, noYesu usinika umama wakhe ukuba abe ngumama wethu.
'' Sithandazeleni thina boni '' Kweli candelo siziqonda sinaboni kwaye sicela umama wethu asithandazele, sisicelo sokuhlangana phambi kukaSomandla, ongasayi kuphika nantoni na ke nathi.
'' Ngoku nangexesha lokufa kwethu '' Eli binzana longezwa ngenkulungwane ye-XNUMX, ngalo sicela iNtombikazi ukuba ihlale ikhona ngelo xesha, kanye njengokuba yayinjalo ngexesha ukufa zikaYesu, ukusikhombisa indlela eya kunyana wakhe eparadesi.
Iziseko zebhayibhile ze Dumisa uMariya umthandazo
Njengoko sibonile, sinzulu umthandazo Ave uMariya yahlulwe yangamacandelo amabini:
Inxalenye yokuqala ivula indlela eya kwiVangeli ngokukaLuka oNgcwele apho babhengeza ukuzalwa komntwana uYesu yiNgelosi eyintloko uGabriyeli; "Ukutyelelwa" kumbuliso wase-Elisabethe kuMariya xa embeka njengosikelelweyo nosikelelwe nguThixo. Kukho ezinye iiVangeli apho ezi ndima zeBhayibhile zingafunyanwa khona: kwiProtoevangelium kaJames nakwiVangeli yobuxoki-kaMateyu.
Inxalenye yesibini inemvelaphi yecawa kwaye iyahambelana nebhayibhile. Kwafunyanwa okokuqala kushicilelwa kwincwadi kaGirolamo Savonarola enesihloko esithi '' Esposizione sopra l'Ave María ''. Isiseko sebhayibhile nguLuka 1:43. Nangona kunjalo, kukho iicawa ezingalisebenzisiyo eli candelo lesibini endaweni yalo "kuba enguMsindisi wemiphefumlo yethu oyikhuselayo."
Ndifanele nditsho nini ukuthi Mvumeleni uMariya?
Sele siwazi umthandazo kwaye siyayazi intsingiselo yawo, ngoku kufuneka sazi awona maxesha afanelekileyo okuthandaza sithi Halala uMariya. Ngelixa lo mthandazo unokwenziwa nangaliphi na ixesha, kulungile ukuba wenze nemikhwa yokuthandaza.
Kulungile ukuthi Yithi Mariya:
Ekuqaleni kwenkqubo yemihla ngemihla: Yindlela ebalaseleyo yokuqalisa usuku, abantu abaninzi ngaphambi kokungena ecaweni beme phambi komfanekiso weNtombi Enyulu kwaye bathandaze Bulelani uMariya.
Xa ushiya ikhaya: kulungile ukucela iNtombikazi eyiNtombikazi ukuba isikhaphe yonke indlela kwaye isikhusele.
Xa uthandaza irosari: kufuneka sixelele iNtombikazi ukuba siyifuna kangakanani kuye kwaye siyithanda kangakanani.
Xa ubukhona phambi komntu onobunzima: Cela iNtombi enyulu ukuba ikuthandazele kwaye uyithandazele loo mntu, ubancede ubakhusele, ubathethelele phambi koThixo, iNkosi yethu.
Ngaphambi kokuba ulale: Isindululo esenziwa ngababingeleli kukuthandaza kumfanekiso weNtombi Enyulu, Zukisa ooMariya abathathu ngaphambi kokuba ulale kwaye ubange ubusuku obuhle.
Njengoko sele sibonile, i Dumisa uMariya umthandazo igcwele intsingiselo, ukusondela kumama kaYesu Kristu, emcela ukuba abenathi rhoqo, kwaye asithandazele. Yenza lo mthandazo rhoqo kwaye usondele kufutshane neNtombikazi enguMariya, mbuze wena, usapho lwakho kunye nabahlobo bakho, ukuba ubakhusele kwaye ubakhaphe ngalo lonke ixesha.
Ukuthandaza u-Hail uMariya ngokusuka entliziyweni kwaye uyenze kakuhle kunika umbulelo ongaphezulu kunokwenza imithandazo eliwaka ngaphandle kokubonisa. Singathandaza sichaze uMariya amaxesha amaninzi njengoko sifuna, ayisoze yaphela, kufuneka sazi ukuba uthetha ukuthini lo mthandazo kwaye siwunike ixabiso elifanele.
Kukho abantu abakuqwalaselayo oku Dumisa uMariya umthandazo njengomthandazo oqaqambileyo nomangalisayo, ekungekho mntu, nokuba akukho ngelosi inokuyiqonda ngokupheleleyo intsingiselo yawo. Lo mthandazo ukugcwalisa ngovuyo kwaye ngendlela efanayo, uMama wethu ufumana le mvakalelo ngalo lonke ixesha sithandaza lo mthandazo kuye.
Unokuba nomdla: Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu